Looking back to 2066 Nepali Movies – Nepali Movies
Looking back to 2066 Nepali Movies
फिल्म निर्माणमा अप्रत्यासित मात्रामा तीव्रता आए पनि गत वर्ष ०६६ ले नेपाली फिल्मको भविष्य उज्ज्वल हुने संकेत देखाएन । फिल्म निर्माणमा यस वर्ष पनि संख्या हावी भयो । वर्षांदेखि खड्कँदै गएको स्तरीय नेपाली फिल्मको अभाव ०६६ ले पनि पूरा गर्न सकेन । ०६६ को वैशाखदेखि चैत मसान्तमा डिजिटल र सेलुलोइड गरी ४२ वटा फिल्म सेन्सर पास भए भने ०६५ मा सेन्सर भएका समेत गरी त्यत्तिकै संख्यामा फिल्म प्रदर्शन भए । तर, औलामा गन्न सकिने फिल्मले मात्र मुनाफा आर्जन गर्न सफल भए । केहीले लगानीसम्म उठाए भने बाँकी फिल्म व्यावसायिक रूपले असफल रहे ।
डिजिटल प्रविधि हावी हुनाले इतिहासमै बढी संख्यामा फिल्म निर्माण भए । फिल्म धेरै बन्नाले प्रदर्शनका लागि हल पाउन निर्माता-निर्माताबीच हानाथाप नै पर्‍यो । एकैसाथ दुई/तीनवटा नयाँ फिल्म जुधाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्रदर्शित अधिकांश फिल्मले घाटाको व्यापार गरे ।
कुन फिल्म हिट ?
२०६६ मा प्रदर्शित फिल्ममध्ये नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निर्माण र शिव रेग्मीको निर्देशनमा बनेको ‘कहाँ भेटिएला’ सुपरहिट साबित भयो । कहाँ भेटिएलाले गरेको व्यापारको अनुपातमा अर्थापार्जन गर्न नसके पनि अर्का नायक निखिल उप्रेतीको निर्माण र सुरेश दर्पण पोखरेलको निर्देशनमा बनेको ‘निशाना’, गोविन्दा शाहीको निर्माण र दयाराम दाहालको निर्देशनमा बनेको ‘कहाँ छौ कहाँ’ र डिजिटल प्रविधिको ‘इकु दि जंगलम्यान’ ले पनि व्यावसायिक सफलता हासिल गर्न सफल भए ।
वर्षान्तामा प्रदर्शनमा आएका ऋषि लामिछाने निर्देशित ‘आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ’, मदन घिमिरे निर्देशित ‘दोस्ती’ र ज्ञानेन्द्र देउजा निर्देशित ‘हिफाजत’ ले पनि उल्लेखनीय व्यवसाय गरिरहेका छन् । ‘बाटुली’, ‘रक्षक’, ‘धूम’, ‘अर्जुन देव’ तथा ‘पहिलो-पहिलो माया’ ले भने औसत व्यवसाय गर्न सफल भए ।
ठूला बजेटका फिल्म असफल
२०६६ को दसँताका ठूला बजेटका र निकै आशा गरिएका तीन फिल्म, ‘छाडी गए पाप लाग्ला’, ‘कुसुमे रुमाल’ र ‘मेरो एउटा साथी छ’ एकैसाथ प्रदर्शनमा आए । तर, अपशोच ! यी तीनवटै फिल्मले आशातीत व्यवसाय गर्न सकेनन् । निरक पौडेलले पुरानो ‘कुसुमे रुमाल’को सिक्वेलस्वरूप नयाँ ‘कुसुमे रुमाल’ निर्देशन गरे । नयाँ ‘कसुमे रुमाल’ले सिल्भर जुब्ली मनाएको तुलसी घिमिरे निर्देशित पुरानो ‘कुसुमे रुमाल’को साख एकछेउ पनि जोगाउन सकेन ।
उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा बनेको छोडी गए पाप लाग्ला मोफसलमा असफल भयो । जसका कारण निर्देशक उज्ज्वलले अरूको लगानीमा फिल्म निर्देशन नगर्ने घोषणै गरे । प्रभुशमशेर राणाले निर्माण गरेको ‘मेरो एउटा साथी’को लगानी बढी भएकाले चर्चाअनुसारको व्यवसाय गर्न सकेन । तुलसी घिमिरे निर्देशित ‘माया त माया हो ‘फिल्म मोफसलमा असफल साबित भयो । विजय थापाको निर्देशनमा बनेको ‘दाग नमेटिएको घाउ’ले त झन् लगानीको आधा रकम पनि असुल गर्न सकेन ।
२०६६ मा ‘कहाँ भेटिएला’बाट निर्देशक शिव रेग्मी अब्बल निर्देशकमा दरिए । यही वर्ष उनले मह जोडीलाई लिएर आप्रवासी नेपालीको लागानीमा ‘हासी देउ एक फेर’ र भुवन केसीको ‘साथी म तिम्रो’ निर्देशन गरे ।
‘कहाँ छौ कहाँ’ बाट दयाराम दाहाल निर्देशकका रूपमा सफल देखिए भने नेपाल र भारतको सीमा विवादको विषयमा नवल खड्काको निर्माणमा ‘दसगजा’ फिल्म निर्देशन गरेर उनी चर्चामा आए ।
‘निशाना’को सफलताले सुरेश दर्पण पोखरेललाई सम्भावना बोकेको निर्देशकका रूपमा परिचित गरायो ।
‘दोस्ती’बाट मदन घिमिरे र ‘हिफाजत’बाट ज्ञानेन्द्र देउजाको कामको प्रशंसा भयो भने
Posted by maha at 12:22 am	Tagged with: Kaha Bhetiyala, Nepali Movies
Apil Bista in search for actress in Mumbai Scandals of 2066 – Nepali Film Industry